Kuchava riniko...? | POVO
Society & Culture | By Tinashe Muchuri, Actor | 02 October 2015
Nguva zhinji ndinozvibvunza kuti, “Kuchava rini kuti uvaranomwe hweShona huwane kusununguka”. Mukuramba ndichizvibvunza mubvunzo uyu, ndinoona kuti handisini ndoga ndine dambudziko rimwe iri. Mune rimwe detembo mushakabvu Julius Chingono aka Mudhara Judza vakanyora vachiti ivo, “VaShona Varwara”. Asi ndozvitarira zvakadzama ndinoona kuti uvaranomwe hweShona hahuna kubvira hwasununguka.
Kunyange zvazvo nyika yeZimbabwe yava namakore makumi matatu nemashanu yawana kuzvitonga kuzere uye yavawo namakore gumi namashanu yatora ivhu Shona haisati yasunungurwa kubva kumakashu ezvinetso. Vamwe vanogona kuti sei uchitaura kudaro, asiwo kune vanotevera uvaranomwe hweShona vanoona kuti kuchine hondo huru yekuti uvaranomwe hweShona hudambure makashu akahusunga aya.
Chekutanga ndechekuti uvaranomwe hweShona huzere nekupokana, kutukana, kuurayana uye kurwisana. Kubvira pabhuku rekutanga kutsikiswa mururimi rweShona muna 1956 ravaSolomon Mutsvairo, Feso iro rakatsikiswa nekambani yemabhuku yeLongman Zimbabwe, kuchitevera raJoyce Simango “Zviuya Zviri Mberi” rinovawo rokutanga kutsikiswa mururimi rweShona rakanyorwa nomudzimai mugore ra1974, anotenderera panyaya dzokurwisana. Pane imwe nguva muverengi akaverenga bhuku rimwe anenge averenga nyaya dzose zvichisakiswa nengari yokuti manyorerwe acho anongoda kuenderana. Ukatora mabhuku ehutikitivha anongotenderera pahuori hwamapurisa. Hongu hazvo zvinogona kuva saizvozvo kuti mapurisa ava nehuori, asi kunoshaiwavo here mhosva inotikitivhiwa pasina kuora kwamapurisa. Sajeni Chimedza, Chinamanenji Hachifambisi namamwe mazhinji akaita sokudaro, huwori hwamapurisa.
Chinonyanya kudzimba kana ndichitaura nezveuvaranomwe hweShona ndezvekuti huri shuresa pane hweChiRumbi hwakanyorwa navanyori vemuZimbabwe. Vanyori veChiRumbi vanopiwa mukana mukuru chose wekuti vanyatse kutambanuka pamanyorero, muzvidavado kunyange pamhando dzezvinyorwa zvacho. Kana tichienzanisa neChiRumbi, zviri pachena kuti uvaranomwe hweShona hwakasarira shure chose.
Nyaya fupi hakuna dzakawanda. Mabhuku enyaya fupi mururimi rweShona anoverengeka zvichida anogona kutadza kuzadza chanza changu chimwe chete. Kusiya kwemabhuku maviri amadzimai anoti, “Masimba”, “Totanga Patsva”, Tudikidiki kaMemory Chirere naMazambuko rinova bhuku rakapindurwa kubva kunyaya fupi dzaiva dzakanyorwa mururimi rweShona mamwe anenge atova mabhuku avanyori vari kusimukira akaita seiro rakanyorwa nenhengo dzeWin Zimbabwe. Asiwo tikainda kuChiRumbi kune mazhinji mabhuku enyaya fupi akanyorwa nemunyori mumwe akazvimirira uye ayo akanyorwa navanyori vazhinji vakaungana kozouyawo mamwe ainyorwa navanyori vaviri vaviri. Kushaikwa kwamabhuku enyaya fupi kunobudisa pachena kusasununguka kweuvaranomwe hweShona.
Kanapo tikauya kunduri tinoona kuti nduri dzeShona mabhuku ananyanduri akanyorwa navananyunduri vazhinji. Kana totsvaka mabhuku enduri dzomunyori mumwe chete tinoona kuti tinenge tobata vanyori vakaita saChirikure Chirikure, Paul Chidyausiku, Memory Chirere nebhuku rake risina basa nokuti rakanyorwa masikati zvichidawo tozopinza Chiparurangoma ChaMudyanadzo raMordekai Hamutyinei naAaron. C. Hodza wenduri dzamadzinza naShoko Risina Musoro raHebert Chitepo. Mabhuku aya mashoma zvichienzaniswa nounyanzvi hwaiva navanyori vakaita saana G. Mandishona, Wilson Chivaura, J.C. Kumbirai navamwe venguva yavo. Zvinosuwisa kuti kusvika parizvino vananyanduri vazhinji vakazorora nduri dzavo dzisina kuunganidzwa pamwe chete kuitira vaya vanodzidza uvaranomwe hweShona vagonyatsowana mukana wekunyatsoongorora nduri dzomumwe nomumwe nyanduri zvine udzamu uye zvakadzama. Zvainaka kudai kune mabhuku akawanda akatsikiswa ari enduri dzomunyori mumwechete kuti vadzidzi vanyatsogungwa nokutapatira kwouchenjeri hwanyanduri uye zvaanofarira mukunyora kwake pamwe nezvidavado zvaanonyanya kufarira.
Imwe yenguva kururimi rweChiRumbi tinoona kuti kunowanikwa mabhuku anenge akasangana nduri nenyaya fupi dzomunyori mumwe chete sebhuku raJulius Chingono, “Not Another Day” namamwewo. Kunyange munyori umwe achinetsa kuita ari ega zvaigona kuitwa sekuuya kwebhuku “Together” unova muunganidzwa wenduri nenyaya fupi dzavanyori vaviri vanoti Julius Chingo naJohn Epel. Kushaikwa kwezvinyorwa zvakadai zvinoreva kuti uvaranomwe hweShona hausi kutambanuka pamwe nekuvandudzika. Huri kuramba hwakabopwa namakashu anohutadzisa kunyatsofamba zvakanaka. Izvi zvinobudisa pachena basa rinoda kuitwa kuti uvaranomwe hweShona huwane kutambanuka nokusunguka kwakanaka.
Kana kuri kudivi rengano unogumbuka ukazvimba mapapu. Pane mumwe munyori andinokurudzira kuti kudai aramba akasimba nekusimudzira ngano. Ndinodaro nokuti kana dziri ngano dzinonzi ngadzirambe dziri musango chinova chinhu chakapa hama yangu Ignatius Mabasa kukavadzana nacho apo akanyora ngano “Wachi yaTsuro” zvikapa vamwe vanoti vakurudziri wemutauro weShona uye ruzivo rweShona kuzvimbirwa kuti anoitirei kuti Tsuro naGudo vanhasi abude musango. Hanzi Tsuro naGudo havafaniri kushandisa midziyo iriyo zvino uno. Asiwo muverengi akatarira kwakabviwa nengano dzinotendeka kuti inyaya dzaiitika muvanhu zvichienderana nokuvandudzika kwaiita upenyu hwavanhu munharaunda dzavagere. Rungano rwaTsuro naGudo rwakatanga vari musango apo pakatanga vanhu kuchera matsime, Tsuro naGudo vakatangawo kuchera tsime paya pakaramba Tsuro kuchera tsime pamwe nedzimwe mhuka. Pakatanga vanhu kurima minda, Tsuro naGudo vakavambawo kurima minda yamanhanga pamwe neyenyimo. Pakatanga vanhu kuchera makurwe, Tsuro akaonekwa achichera makurwe. Paya pakatanga vanhu kukama mukaka uyewo vachirwisana neutongi hweudzvinyiriri, Tsuro naGudo vakaonekwa vachirwisana nevarimi vakanga vachivatorera masango avaigara apo vaikwira mumuchovha vachidonhedza masaga pamwe nokundokama mukaka kumatanga, uri mucherechedzo wekupikisana nehutongi hwaiva huripo panguva iyoyo hwokubvutira vanhu pfuma yavo. Vanhu pavakavawo navashandi vanorera vana, Tsuro takamuona achibatsira kurera mwana wamai vaiva nemwana aivatadzisa kurima achichema baba vacho vari musiyadzasukwa. Kuva iyeka, anonzi nheni mazuva ano. Izvi zvinoburitsa pachena kuti Tsuro haasariri shure sekusarira kwaita uvaranomwe hweShona asi kuti anoramba ari mberi sehuma. Saka anoti Tsuro naGudo asabata michina yamazuvano kombuyuta, rerofoni kana kushandisa Whatsapp, Facebook, Twitter, Selfie zvichienda zvakadaro ndiye uya anoda kuti uvaranomwe hweShona hurambe hwakasara shure.
Imwe nyaya inodzimba ndeyokuti zvinozivikanwa nomunhu wese wemuZimbabwe kuti hakuna rurimi runonzi Shona. Shona chigadzirwa chemubatanidzwa hwendimi dzinosvika shanu idzo dzakabva dzanzi dzive inonzi “Standard Shona”. Uyu mutauro unamazwi mazhinji echiZezuru. Zvinoreva izvo kuti ushanu hweShona hauwanikwi muuvaranomwe hweShona. Mazwi echikorekore, ChiNdau, chiManyika neChiKaranga anowanikwa mashoma muStandard Shona. Izvi zvinoreva kuti zvinonyorwa hazvisirizvo zvinotaurwa navanhu vazhinji. Kushaikwa kwendimi dzinotaurwa noruzhinji uye muupande hwakasiyana hweShona zvinoratidza kuti uvaranomwe hweShona hunotambudza vadzidzi vazhinji nokuti vanenge vachirwisana nekutanga kunzwisisa mutauro weStandard Shona. Shona inotaurwa kumba inenge yakasiyana dzimwe nguri neinotaurwa muchinyorwa cheChiShona. Kana chiri ChiNdau neChiKorekore hachiwanikwi muuvaranomwe hweShona. Chindau chinowanikwa mumaBhaibheri echechi yakaita seUCC. Kana chiri ChiKorekore tinenge totochihwa kana Oliver Mutukudzi achinge ava kuimba musambo wemumhanzi weKatekwe wekumusha kwake kuMashonaland Central. Pasina izvozvo kuti usangane neKorekore muzvinyorwa zveuvaranomwe ihondo chaiyo. ChiManyika unozochihwavo kana “Mutirowafanza” mutambi mukuru wemunaMutirowafanza dhirama rapaTerevhizheni otaura. Asizve zvikamu zvacho zvishomasasa. Yakasungwa namakashu anotoda zibanga rinocheka kose riri mesa pakupinza kuti igone kudambura makashu aya.
Kudai vakuru vanoona nezvedzidzo vaigona vakasunungura uvaranomwe hweShona kuti kana pane vanogona kunyora zvinyorwa zvinozoshandiswa muuvaranomwe hweShona vanyore nendimi shanudzo dzinonzi dzinoumba Shona vadzidzi vawane kutapirirwa nemutauro vasingasungirwi kuti vatevera “Standard Shona”. Ndakapinda mukunyora ndine vavariro yekuti ndifambise ChiKaranga mberi nokuti ndicho chandaiva ndakura ndichibwereketa asi ndakaudzwa kuti kana uchida kuti bhuku rako ridzidzwe muzvikoro unofanirwa kushandisa “Standard Shona” pakurinyora. Ini ndozvibvunza kuti ko sei vanhu vachida kundisunga nomusungo usina uchenjeri? Ko pandinonyora ndinonyorera mudzidzi here kana kuti mudzidzi kuzowana chinyorwa changu kunge chasarudzwa? Handiti ndinonyorera muverengi? Hunzi kana uchinyora nezvehondo uchiimba nziyo dzokuhondo usaisa zvinyadzi madziri. Ndoshama kuti ko dzinozova nziyo dzokuhondo here? Kana ndikabvisa zvinyadzo panziyo dzehondo dzinozova nziyo dzehondo papi? Kana ukabvisa muchohwe pajakwara napanhimbe chii chinosara?
Unoona kuti vana vezera rimwe vanoita uvaranomwe hweChiRumbi vakasiyana nevanoita uvaranomwe hweShona pane zvavanofanira kuziva. Unoona kuti “I Will Marry When I Want” rine chirevo chinoti, “Wisdom is like a penis every man carries his own” zvinoreva kuti, “Uchenjeri hunenge sikarudzi yemurume, murume mumwe noumwe ane yake” kana zvichishandurwa. Bhuku iri rinenge richiitwa navana vefomu 4 asi iwe ukanyora zvinoenderana naizvozvi unonzi wava kunyadzisira. Uvaranomwe hweShona hunondiudza kuti usati nyoka inyoka iti igavi kana kuti bhande. Zvino zvazvinonzi uvaranomwe hunoratidza zvinenge zvichiitika munharaunda yakanyorwa chinyorwa ichi hweShona hunonzvenga mbambo dzouvaranomwe. Munyori weShona akasungwa mbiradzakondo.
Pane dambudziko rekushaikwa kwerudo runonzi rudo. Koshaikwa kunodzidzira vana zvakanaka. Mukunyora kwedu zvinonzi hazviiti kuti kuve nemunhu wakarurama. Kana mutambi akava akarurama chaizvo yatova mhosva. Chii?
Imwe nyaya hombe yoshupa ndeyokuti kana pakaita chinyorwa vapepeti vanotanga kutsvaka kuti bato riri kutonga munyika reZANU PF rakaenzaniswa nei uyewo reMDC rakaenzaniswa nei kunyange bhuku risinei nezvematonganyika. Kana izvozvo zvafungidzirwa zvotonzi manyorero awaita vakuru veZANU PF naava vanopikisa apa hazviiti. Twasanudza uchienda wakadai ndiko kuti bhuku rako ritambirike. Hakuna uvaranomwe huri kunyorerwa vaverengi zvichibva muunyanzvi hwanyakunyora asi kuti unofanira kutevera nzira yakatarwa yekunyora nayo. Mukudai tinorashikirwa nenyaya pamwe nenhaurwa dzakakosha.
Kushaikwa kwenyengo muuvaranomwe hweShona. Dambudziko iri rinouya apo kudanana kwemunyaya zhinji kuri kuteya riva rokuti nyaya iwane kufambira mberi. Mabhuku akaita sana, “Kumuzinda Hakuna Weko”, “Rurimi Inyoka”, “Kusasana Kunoparira”, “Chinamanenji Hachifambisi” ose anonongedzera kudanana senzira yemusungo. Hakunawo zvinyorwa zvinoita kuti muverengi atapirirwe nerudo kanawo magariro akanaka anoita vanhu munharaunda dzavo. Nyaya ndedzemhirizhonga. Kana ari semabhuku anokurukura nezvougaro hwepasichigare unoona kuti kurava “Jekanyika” warava “Sarawoga” uye warava chikamu chikuru cha”Tambaoga” nokuti panotofanira kuva nomwana anorwira humambo hwababa vake hwange hwava kubiwa nomuzukuru kana nomunin’ina wababa.
Imwe nyaya ndeyokuti zvinonzi hakuna vaverengi vakawanda veshona saka nyaya dzinobuda kana kwapera nguva refu chose. Uvaranomwe hweShona hausi kufambirana nenguva. Hunoramba huri shure chose. Ndinofara kuti zvino Shona yava kuwanikwawo padandemutande. Ndinoyeuka pandakatanga bhurogu rangu http//:mudararatinashemuchuri.blogspot.com umwe sahwira wangu wakandibvunza kuti ndaipedzerei nguva kunyora nyaya neShona padandemutande achiti yaizoverengwawo nani. Ndakamudaira ndichiti mumwe chete achaverenga ndiye wandakananga. Sekutamba ndakaritanga ndokubva ratambarara. Iye zvino kune vazhinji vanorirava vamwe vachiri pembedza zvichingoinda zvakadaro. Chinofadza ndechokuti kunewo vamwe vakazoona zvakanaka kushandisa mikana yakaita sefesibhuku, newhatsapp kuita mapeji anenge achiburitsa kuvanduka kweShona. Kudai zvaramba zvakadaro pamwe tingakunda.
Do you fancy yourself as a future captain of the Test team Full Article
I participated in the chores to get a real sense of what it is like to live there and realised that we have it much easier back home!